KMD Group of Companies မှ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုအောင်မြင်သော KMD ဝန်ထမ်းမိသားစု၀င် များအတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပေးခြင်း။ | Knowledge Management + Decision
Mr KMD & Miss KMD for 2021
KMD Group of Companies မှ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုအောင်မြင်သော KMD ဝန်ထမ်းမိသားစု၀င် များအတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပေးခြင်း။
by adminkmd | Aug 29, 2020 | csr |0comments
တက္ကသိုလ်၀င်တန်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်မှု့အတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနား ကို 28.8.2020 တွင် Pansodan Meeting room တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်၀င်တန်း စာမေးပွဲ ကို (၄) ဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် ထူးချွန်စွာ‌ ‌အောင်မြင်ခဲ့ပါသော ‌‌ဒေါ်အိအိမွန် (MRS Sales) ၏ သမီးဖြစ် သူ အား KMD Group of Companies မှ ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် CEO, COO, Senior Director များ, တာ၀န်ရှိသူများ နှင့် ‌‌ဒေါ်အိအိမွန် တို့ မိသားစု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
CEO မှ Congratulation speech ပြောကြားခဲ့ပီး Sayar U Bo Bo Lwin မှ ဂုဏ်ပြု ဆု ပေးခဲ့ပါသည်။
ဂုဏ်ပြုဆု တွင် ဆုတံဆိပ် နှင့် တက္ကသိုလ် ဝန်ထမ်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်သော ဝန်ထမ်းသားသမီးများ အတွက် ပညာရည်ချွန်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း တွင် ၄ဘာသာ ဂုဏ်ထူးအတွက် ငွေကျပ် နှစ်သိန်း၅သောင်း ကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
No 174-182, Pansodan Road (Middle Block), Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
Phone: +95-1-8-381129, 381776, 381035
Copyright © 2022, KMD. All Rights Reserved.